img_0957.jpg – Myanmar Mobile App
Posted on November 25, 2018 Author myanmarmobileapp	Comment(0)
လေယာဉ်နဲ့ ရေငုပ်သင်္ဘောတို့တိုက်ရိုက်ပြောဆိုနိုင်မယ့်နည်းလမ်းအား MIT ရှာတွေ့
Zawgyi Version ရေနဲ့လေတို့ရဲ့ ကန့်သတ်ချက်တွေကို ကျော်လွှားနိုင်ဖို့အတွက် sonar နဲ့ radar တို့ကို ပေါင်းစပ်အသုံးပြုမှာဖြစ်ပါတယ်။ ရေငုပ်သင်္ဘောတွေဟာ ရေအပေါ်ကဟာတွေနဲ့ တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်နိုင်ခြင်း မရှိပါဘူး။ signal ကန့်သတ်ချက်တွေရှိနေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပြောင်းလဲသွားတော့မှာပါ။ သုတေသီတွေဟာ ရေအောက်ကနေ လေထဲကို ဒေတာတွေကူးပြောင်းလို့ရစေမယ့် wireless system လေးကို ဖန်တီးနေကြပါတယ်။ ဒီနည်းလမ်းလေးကတော့ translational acoustic-RF communication (TARF) လို့ အမည်ပေးထားပြီး sonar အချက်ပြစနစ်တွေကို မျက်နှာပြင်ပေါ်ဆီ ပို့လွှတ်လိုက်ပါတယ်။ အဲဒီအခါမှာ သေးငယ်တဲ့တုန်ခါမှုလေးတွေ ဖြစ်စေပြီးတော့0နဲ့ 1 ဆိုတဲ့ binary data လေးတွေအဖြစ် ကူးပြောင်းသွားမှာပါ။ ရေပေါ်မှာကတော့ high frequency radar (30GHz to 300GHz) […]
သုံးပတ်အတွင်း ၁ သန်းကျော် ရောင်းချရတဲ့ Xiaomi Mi 8 Series များ
Posted on June 25, 2018 Author Ko Nyi
Mi 8 ကို ယခုလ ၅ ရက်နေ့မှာ တရုတ်တွင် စတင် ရောင်းချပေးခဲ့ပါတယ်။ 6/64GB Version ကို ၄၂၀ ဒေါ်လာ နဲ့ 6/128GB Version ကို ၅၁၅ ဒေါ်လာ ၀န်းကျင် သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ Explorer Edition မှာ 8GB/128GB ထည့်သွင်းထားပြီး ဒေါ်လာ ၆၀၀ ၀န်းကျင် ကျသင့်မှာပါ။ Mi 8 SE ရဲ့ 4GB/64GB Model ကို ၂၈၂ ဒေါ်လာ ၊ 6GB/64GB Model ကို ၃၁၃ ဒေါ်လာ သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ အဲဒီ သုံးလုံးထဲမှာ ပထမနှစ်လုံးကိုသာ လက်ရှိမှာ ရောင်းချပေးထားပါတယ်။ နောက်ဆုံးမော်ဒယ်ကို ဇူလိုင်မှာ ရောင်းချမယ်လို့ […]
XIAOMI MI 8 SE: IS THIS THE NEW FLAGSHIP KILLER?
Posted on June 5, 2018 Author jacksonsoemoe
ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းက တရုတ်စမတ်ဖုန်းထုတ်လုပ်သူ Xiaomi ဟာ Mi8 စမတ်ဖုန်းနဲ့ အတူအားလုံးကို အံ့အားသင့်စေမယ့် စမတ်ဖုန်းတစ်လုံးကို မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီဖုန်းကတော့ Mi8 ရဲ့ တန်ဖိုးနည်းမိုဒယ်လို့ သတ်မှတ်နိုင်တဲ့ MI 8 SE ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်အဲ့ဒီဖုန်းဟာ Qualcomm ရဲ့ Snapdragon 710 SoC ကိုပထမဆုံးသုံးထားတဲ့ စမတ်ဖုန်းလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဖုန်းသုံးသပ်သူ အများစုကတော့ MI 8 SE ကို FLAGSHIP KILLER ဖုန်းလို့သတ်မှတ်နေကြတယ်။ တကယ်ရော MI 8 SE ဟာ FLAGSHIP KILLER ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်ရဲ့လားဆိုတာကို သူ့မှာပါဝင်တဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို လေ့လာကြည့်ရအောင် …. Design MI 8 SE မှာတော့ Mi […]